Arụ ma ọ bụ na-ebi ndụ? | Apg29
Arụ ma ọ bụ na-ebi ndụ?
The iwu (okpukpe / onwe ịdị nkọ) na-ekwu - eme. Jizọs na-ekwu - Mere.
Mgbe i kweere na Jizọs bụ banyere-eme, ma na-ebi ndụ. Mmụọ Chineke ndụ ga-eruba site ị na na ndụ na-eme ka anyị-eme ọbụna karịa ihe iwu chọrọ. E nwere ihe dị ukwuu ná ndụ.
The iwu, okpukpe na nke ịdị nkọ na-eme ka anyị mpako (mgbe anyị jikwaa na-ya niile ọnụ maka a mgbe). Ma nzọpụta na-esi n'aka na anyị na-enye Jesus otuto nile. Anyị nwere ekele na umeala n'obi. Ndị okpukpe na-ma ndị kasị mpako (mgbe ihe ịga nke ọma) na kasị dara mbà n'obi (mgbe ha na-erukwaghị eru ịnata). Mgbe e nwekwara ndị okpukpe ihu abụọ na ndị na-arahụ n'elu ka nkiri azụmahịa. Ma a zọpụta mmadụ bụ ekele ma na-achọ na-eso ya ọ hụrụ n'anya Jesus.
Iji dị ndụ na nzoputa bu ime ihe ọma stof na ekele, n'ihi na ị na-ama hụrụ n'anya.
Ndị Rom 10: 2-4: "N'ihi na m pụrụ ịgba akaebe na ha nwere ịnụ ọkụ n'obi maka Chineke, ma kọrọ nghọta. N'ihi na ha na-adịghị aghọta ezi omume Chineke, na-agba mbọ ha guzosie ike ezi omume ma na-ebutere ka ezi omume Chineke. N'ihi na Kraịst bụ mmezu maka ezi omume ọ bụla na-ekwere. "
Mgbe i kweere na Jizọs bụ banyere-eme, ma na-ebi ndụ. Mmụọ Chineke ndụ ga-eruba site ị na na ndụ na-eme ka anyị-eme ọbụna karịa ihe iwu chọrọ. E nwere ihe dị ukwuu ná ndụ. Jizọs abụghị adịghị ike, ma jupụtara agbọghọbịa na ndụ. Ọ na-ewepụta ya akara na ndụ anyị, ka mma mgbe anyị na-amụta na ya were n'elu n'isi. Anyị na-adịghị na-ejighi anyị àgwà na-aghọ a robot. Kama, anyị na-achọta onwe anyị na Chineke na ike ugbu a na-eje ije n'ihu na Jesus. Anyị abụghị naanị ọzọ.
Mgbe mmehie na-akụ na mgbe ahụ?
Ahapụ ya oghe! Ị na-ebi na mgbe niile ugbu a na Jesus. Life na Jizọs bụ nnọọ ihe na-aga azụ mmehie igbo na unyi.
2Pe 2:22: "Ma, ọ na-mere si ha dị ka e si ekwu bụ eziokwu, sị: A nkịta-alaghachi ya n'agbọ ọ gbọrọ, na a na-asa na atụrụ na apịtị."
Gaa n'ihu gị ije na Jizọs kama na òkè na ndị ọzọ. Jizọs bụ ebube.
Chineke na-agọzi gị!